दशैंमा गुल्मी घुम्दै हुनुहुन्छ ? नछुटाउनुहोस् यी ठाउँ : Sajha Network - Nepal's No. 1 Online News Portal
-हुमाकान्त पोखरेल, गुल्मी ।
दसैँ मनाउने तरिका फरक–फरक छन् । कसैले खानपिनलाई खसैँ मान्छन् त कतिले घुमघामलाई दसैँ मानेका हुन्छन् । रोजगारिको शिलशिलामा होस् वा अन्य कारणले गाउँभन्दा बाहिर रहेकाहरुका लागि दसैँ घुम्ने अवसर हो । आफन्तकोमा दसैँ मान्न गएकाहरु पनि घुम्न पाउनेछन् । यदि तपाई गुल्मी हुनुहुन्छ, र कहाँ घुम्ने भनेर ठाउँ भेटाउनुभएको छैन भनेपनि चिन्ता नमान्नुहोस । किनकि हामि जानकारी दिदैँछौ ।
धुर्कोट गाउँपालिकाको मध्यभागमा पर्ने धुर्कोट कोट नेपालको चौबिसे राज्यमध्येको ऐतिहासिक दरबारको नाम हो । धुर्कोट कोटमा खड्गछत्रको आरधाना गरिने भएकोले पनि यो निकै महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो ।
मध्यकालका राजाले दरबारको परिसरमा भवानिको मन्दिर बनाएर पुजा गर्ने चलन चलाएपनि अहिले पुरै कोटलाई नै मन्दिरको रुपमा मानिएको छ । जुन नेपाल एकिकरणपूर्वको २४ से राज्यमध्येको धुर्कोट राज्यको राजानी राजदरबार हो ।
उत्तर मध्यकालिन समयमा ७०० घरधुरी रहेको धुर्कोट १४६५ मा न्यायनको केन्द्र बन्यो । बहादुर साहको पालामा काजि दामोदर पाण्डेको फौजले धुर्कोटलाई बृहत राज्यमा गाभेको हो । कोटमा मल्लकालिन राजाका हतियार र तरवारलाई बर्षको एक दिन भगवान मानेर पुजा गरिन्छ ।
धुर्कोट कोटमा नवमिको दिन भाकल चढाउने, परेवा उडाउने र पञ्जवली दिने गरिन्छ । कोटमा पूर्णिमाको दिन पुजा र सरायँ नाच हुने गर्दछ । धुर्कोट कोटबाट गाउँपालिकाका सबै वडा देखिनुका साथै विभिन्न शृङ्खला पनि देख्न सकिन्छ ।
गुल्मी, पाल्पा र स्याङ्जा तीन जिल्लाको मुख्य संगम स्थल रुरु क्षेत्र कालीगण्डकीको नामले परिचित छ । नेपालको चार धाम मध्येको एक र नेपालको बनारस भनेर चिनिने रुरु क्षेत्र पर्यटकीय गन्तब्य पनि हो । रुरु क्षेत्र धार्मिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वको एउटा धरोहर र खम्बा हो र गुल्मीको मुख्य प्रवेशद्वार पनि ।
रिडीदेखि डेढ किलोमिटर उत्तरमा भृगुतुंग नामक गुफा रहेको छ । यंहा भगवान शिबले आफ्नी पत्नी पार्बतीको शव बोकेर संसारको भ्रमण गर्दै गर्दा सतीदेविको उपल्लो दांत पतन भएको मान्यता रहेको छ । जुन श्री स्वस्थानी महात्यम्यमा पनि केहि ब्याख्या गरिएको छ ।
त्यस्तै गलफूलगुफा पनि गुल्मीको थोर्गा तर्फको भागमा रहेको छ । धार्मिक धरोहर रुरु क्षेत्रमा साना ठूला गरेर १ सय बढि मन्दिर तथा साना ठूला केहि गुफा पनि छन् । रिडीमा मुख्य गरि माघे सक्रंन्तिमा तीन दिन र ऋशिकेश उत्सब २ दिन ठुलो मेला लाग्ने गर्दछ ।
रेसुङ्गाबाट उत्तरतिर हेर्दा एकैदिनमा पुगिएला जत्तिकै नजीकमा अन्नपूर्ण प्रथम, दोस्रो र तेस्रोका साथै धवलागिरी, माछापुच्छ«्रेलगायत १५ भन्दा बढी हिमाल देखिन्छन् । सूर्यास्तको बेला धवलागिरीको छायाँ त रेसुङ्गामै पर्दछ । यदुकानन्दले वि.सं. १९८३ मा बनाएको यज्ञशाला रेसुंगामा छ ।
सुनको गजुर र तामाको छाना भएको प्यागोडा शैलीमा निर्मित यज्ञशाला रेसुङ्गाकै सबैभन्दा ठूलो मन्दिर हो । रुरुक्षेत्र पादस्थान हो । भने रेसुङ्गाक्षेत्र शिरस्थान हो । नेपाल सरकारले देशका प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्यहरु मध्ये रुरु रेसुङ्गा क्षेत्रलाई पनि विकास गर्ने उद्देश्यले २०६३ सालमा रुरु रेसुङ्गा क्षेत्र संरक्षण तथा पर्यटन विकास समितिको स्थापना गरेको छ ।
गुल्मी चारपाला एतिहासिक तथा पुरातात्विक दृष्टिकोणका अलावा धार्मिक दृष्टिकोणबाट पनि अत्यन्तै महत्वपूर्ण मानिन्छ । नेपाल एकिकरण हुनुभन्दा पहिले यो एउटा स्वतन्त्र राज्य थियो जुन गुल्मी राज्य नामले चिनिन्थ्यो ।
वीर शाही यहाँका पहिला राजा थिए । हाल इश्वरी देवीको नामबाट चिनिने गुल्मी चारपालामा बर्षको दुई पटक पूजा आजा गर्ने, पञ्चवली ल्याउने र सरांयँ नाच्ने गरिन्छ ।
गुल्मीको कालीगण्डकी, सत्यवती, चन्द्रकोट गाउँपालिका र मुसिकोट नगरपालिका साविकका २६ वटा गाविसमा पर्ने थाप्ले सत्यवती वन क्षेत्रले वातावरणीय र धार्मिक पर्यटकीय क्षेत्रको ३७ हजार ८४३ हेक्टर भूभाग ओगटेको छ ।
वातावरणीय, पुरातात्विक, जैविक विविधताजस्ता विशेषता थाप्लेको लेकमा छन् । ‘थाप्ले सत्यवती’ क्षेत्र स्थानीयस्तरमा मात्र नभई राष्ट्रिय तथा अन्तर्रा्ष्ट्रियस्तरमा नै महत्व राख्ने टिमुर, चिराइतो, लोक्ता, अल्लो, सुगन्धवाल, सतुवालगायत जडीबुटी पाइन्छन् ।
जनसहभागितामा आधारित सूक्ष्म पारिस्थितिकीय प्रणाली व्यवस्थापनको अवधारणाअनुरुप समग्र वन क्षेत्रको व्यवस्थापनद्वारा प्राकृतिक स्रोत, जलस्रोत तथा जैविक विविधताको संरक्षण, पर्या–पर्यटनको विकास एवं पर्यावरणीय सन्तुलन कायम गर्ने लक्ष्यका साथ ‘थाप्ले सत्यवती’ लाई संरक्षित वन समेत घोषणा गरिएको छ ।